Mpaninjara rano fisotro → Trano • trano fonenana • Lava trano fisavana
Mila dispenser rano ao an-trano ve ianao? Ny orinasa Water Point dia manolotra ireo mpamaky rano anaty tavoahangy, mpisotro, loharanon'ny mpitondra an'izao tontolo izao, izay mpizara manokana antsika any Polonina.
Dom no toerana izay andaniantsika betsaka indrindra. Te hahatsiaro ho tsara sy milamina eto izahay. Eto isika dia manomana sakafo, miala sasatra ary matetika miasa koa. Isan'andro isan'andro ao an-trano, miaraka amin'ny fianakaviana sy ny sakaiza, misotro rano vera be isika. Noho izany dia manantena izahay ranoMalalaka sy salama ary nampiasa tsiro tokana izahay. Ny fampiononana sy ny fahazoana rano toa izany dia homena antsika dispenser rano fisotro any an-trano.
Ny fidirana tsy tapaka amin'ny rano madio avy amina dispenser, malalaka amin'ny fikorontanan'ny mikrôloika sy simika, dia ahafahantsika hijanona maharitra mandritra ny fotoana maharitra ary hikarakara tsara ny tontolo iainantsika amin'ny fampihenana ny fako, i.e. nampiasaina sy nariana ireo tavo-drano feno rano.
Mpamatsy rano mavesatra sy maoderina dia ilaina indrindra ao an-tokantrano ary tena manamora ny fiainana izany, satria tsy mila mividy rano mihintsana ary avy eo mandany angovo amin'ny fanariana azy ireo. Ny fampihenana ny habetsaky ny fako vokarina ao amin'ny ankohonantsika dia singa manan-danja amin'ny fikarakarana ny tontolo voajanahary.
Manatsara ny fahasalamantsika ny fisotroana rano tsy tapaka sy madio ary mamolavola ny fahazaran-tsakafo ara-tsakafo tsara ao amin'ny fianakaviana faralahy.
Misaotra ny dispenser rano fisotro ianao, afaka miomana amin'ny rano matsiro ihany, fa mamelona koa ny voasarimakirana na rano mamirapiratra, ary ny fananganana moderina maoderina dia hanantitrantitra ny fisian'ny efitrano rehetra.
Ny fitomboan'ny vatana dia manatsara ny fanoherana ny vatana amin'ny aretina, anisan'izany ny aretin'ny valan'aretina, satria mando tsara ny moka mipetaka ny maso, ny orona ary ny vava dia sakana mahomby amin'ireo microorganisms nanafika antsika. Ny fisotroana rano mahasalama sy madio dia misy fiantraikany tsara amin'ny fisehon'ireo hoditrao ary mampihemotra ny fizotran'ny fahanterana ary koa ny fisehon'ny kitrony. Ny fikorianan-drano mety tsara amin'ny vatana dia misy fiantraikany amin'ny elastika amin'ny hoditra tsara, izay miaro amin'ny vatantsika.
Ny rano ao amin'ny vatantsika dia:
-tombina ho an'ny otrikaina omena amin'ny vatantsika miaraka amin'ny sakafo
- singa iray izay tafiditra ao anatin'ny tambajotranay
-regulator ny fiasa mety amin'ny taova, anisan'izany ny ati-doha
- mpandrindra ny hafanan'ny vatana
Izany no ao an-tsaina, tadidio ny misotro rano manodidina ny 2 litatra isan'andro. Tena zava-dehibe tokoa izany ho an'ny olona mikasa fanafody ary iharan'ny aretina ara-pitsaboana isan-karazany.
Na izany aza, mbola lehibe kokoa ny fangatahan'ny rano amin'ny zaza sy ny zaza. Tokony hisotro rano madio sy manambola tsy mila siramamy, tsiro ary loko takelaka ny ankizy.
Ireo no antony tokony hiheveranao fa mividy dispenser rano fisotro ho an'ny tranonao na trano fonenanao, satria manome antoka tsy hidiran'ny rano madio sy mahasalama izany. Ho lasa fitaovana azo an-dakozia izany.
Ny fisotroana rano fisotro dia mamela ny fanomanana ara-pahasalamana ho an'ny fianakaviana manontolo. Ireo fitaovana ireo dia ho mora ampiasaina sy mahafinaritra ny olon-drehetra, eny fa na dia ny mpianakavin'ny zandriny indrindra aza, satria narahin'ny fiasa sy ny firaisan-kina.
rano-silinder tsy manisy ranorano mafana an-trano ao an-tokantrano tokanarano mafana ao an-tranorano madiorano maimaimpoana ao an-tranofamatsian-drano ranodispenser rano an-tranovidin'ny dispenser rano an-tranofamerenana ny rano any an-tranodispenser rano ho any Warsaw an-tranodispenser rano misy karbonika ho an'ny tranodispenser rano misy karbonika ho an'ny Warsaw tranodispenser rano an-tranodispenser rano ao amin'ilay tranoNy fisotroana rano an-tranodispensers ny lohataonarano karboninakarbonika rano ao an-tranorano mafanafitantanana rano ao an-tranoinona ny rano entin-kitay ho an'ny tranorano malefaka ao an-tranomivantana avy amin'ny paompyrano mavesatra ao an-tranorano ao an-tranorano ho an'ny tranorano mamelatra ao an-tranorano mineraly ao an-tranomisotro rano ao an-tranorano mamontsina ao an-tranorano amin'ny paiso ao an-tranorano ao anaty tranorano ao amin'ny fametrahana tranorano ambanin'ny tany ao anaty trano vaovaorano mahasalama ao an-tranorano mahasalama mahasalamarano mangatsiakarano ao an-trano